कपिल र सिद्धुपाजीको लफडा, अब सिद्धु आउलान् शोमा ? | KTM Khabar
कपिल र सिद्धुपाजीको लफडा, अब सिद्धु आउलान् शोमा ?
२०७४ साउन ३२ गते ११:४५ मा प्रकाशित
३२ साउन । भारतीय कमेडियन कपिलले सिद्धुसँग लफडा गरेका छन् । उनी एकपछि अर्का सहकर्मीसँग झगडा गरिरहेका छन् ।
यसअघि धेरै पटक कपिलको शोका लागि सिद्धुले आफ्नो टाइम एडजस्ट गर्दै आएका थिए । तर, यसपटक कपिलले एक दिन पनि आफ्नो लागि पर्खिन नसक्नुले उनको चित्त दुख्नु स्वभाविकै थियो । सिद्धु असन्तुष्ट भएपछि कपिलले फेरि अर्चनालाई फोन गरेर आफ्नो कार्यक्रममा नआउन भने ।